Ikhaya leholide emaphandleni - I-Airbnb
Ikhaya leholide emaphandleni
Krummhörn, Niedersachsen, i-Germany
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Almut
U-Almut Ungumbungazi ovelele
I-bungalow e-North Sea enhliziyweni yemvelo
Jabulela iholide lakho kuphola elihle lasehlobo. Ukuzola kule ndawo yasemaphandleni enhliziyweni yemvelo kunikeza ushintsho kusukela ekuphileni kwansuku zonke okuvame ukuba nengcindezi. Inja yakho nayo yamukelekile kakhulu.
Indlu (cishe amamitha-skwele angu-80) inekamelo lokulala elinombhede wabantu ababili, igumbi lokuphumula elithokomele elinohhavini kanye negumbi lokudlela. Ikhishi elixhumene nalo lihlome ngakho konke okubalulekile futhi linekhishi elinehhavini, i-ceramic hob, isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha, i-toaster, iketela kanye nomakhi wekhofi.
Indlu yokugezela ifakwe ubhavu / inhlanganisela yeshawa. Indlu yangasese ihlukene. Izinyanga zasehlobo zingachithwa ngokumangalisayo kuthala elimbozwe kancane noma ku-hammock engadini.
Indawo inikeza amathuba amahle okuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili. Indawo yamaholide eyaziwayo iGreetsiel iqhele ngamakhilomitha ayi-7 kuphela futhi ingafinyelelwa kalula ngebhayisikili. Indawo yomkhumbi e-Norddeich (17 km away) inikeza ithuba lokuvakashela iziqhingi zase-East Frisian ze-Norderney noma i-Juist.
Mein Name ist Almut, ich bin in den Dreißigern und lebe mit meinem Freund, unseren 2 Kindern und unserer Labradorhündin Milka zusammen. Wir freuen uns immer über Gäste in unserer Wohnung, verreisen aber auch selbst gern.
Ngiyajabula ukushiyela izivakashi indawo yeholide lakho ekhaya. Uhlala lapho ungaphazanyiswa. Ngitholakala ngocingo noma nini uma unemibuzo.
UAlmut Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Krummhörn namaphethelo